~~~ နွေမုန်တိုင်း ~~~: March 2008
လျှောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ခရေပင်လမ်းလေးထဲမှာ ခုတော့တစ်ယောက်တည်းအထီးကျန်စွာ လျှောက်လှမ်းနေတာ ငါပါပဲကောင်မလေးရယ်။
ငါအခုခရေပန်းလေးတွေကောက်နေတယ်။ ခရေတစ်ကုံး သီကုံးမလို့ပေါ့။
ဟိုအရင်ကဆို ဒီလမ်းလေးက ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစွာနဲ့ အမှတ်တရပေါင်းများစွာ မှတ်ကျောက်တင်ခဲ့တဲ့ နေရာလေးပေါ့။ တို့နှစ်ယောက်ခရေပန်းလေးတွေကို ဘယ်သူအများဆုံးကောက်နိုင်မလဲဆိုပြီး လုကောက်ခဲ့ကြဖူးတယ်နော်။
ခရေပန်းတွေကောက်ပြီး ငါတို့နှစ်ယောက်ပေါင်း ကောက်လို့ရတဲ့ ခရေပန်းလေးတွေကို ငါက အိမ်ကိုယူသွားတယ်။နင့်အတွက်ငါကိုယ်တိုင် ခရေကုံးလေးတွေကို သီကုံး ပေးဖို့ပေါ့။ နောက်နေ့ကျတော့ နင့်အတွက်ငါသီကုံးပေးတဲ့ ခရေကုံးလေးတွေကို နင့်ရဲ့ဆံကေသာမှာ ငါကိုယ်တိုင် ပန်ဆင်ပေးခဲ့တယ်။
ခရေရနံ့တွေနဲ့ နင့်ဆံနွယ်တွေကို ငါတန်ဖိုးထားခဲ့တယ်။ နင့်ရဲ့ပိတုန်းရောင်ဆံကေသာက ငါ့ခရေကုံးလေးတွေနဲ့ ပနံသင့်လိုက်တာကောင်မလေးရယ်။ ခရေပန်းကိုမှ မြတ်မြတ်နိုးနိုး ချစ်တယ်ဆိုတဲ့နင့်ကို ငါကလည်း အမြတ်တနိုးနဲ့ တန်ဖိုးထား ချစ်ခဲ့တယ်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းငါက နင့်ရဲ့ပန်းဆက် ဗျတ္တ ပေါ့။ ဒါလေးကိုပဲ ငါကျေနပ်နေမိပါတယ်။ နင့်အတွက် လိုအပ်တာမှန်သမျှ ဖြည့်ဆည်းပေးချင်နေတာကိုက ငါနင့်အပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာတရား ဆိုတာ ကိုနင်လည်းသိခဲ့တယ်။ ငါနင့်ဆီကိုနေ့စဉ် ခရေပန်းလေးတွေ ဆက်ခဲ့တယ်နော် ။
ဒီလိုနေ့စဉ် ဆက်သနေတဲ့ကြားက ......
တစ်နေ့မှာ နှင်းဆီပန်းတွေ တစ်ပွေ့တစ်ပိုက်နဲ့ နင်ငါ့ဆီရောက်လာခဲ့တယ်။ နင်ပြောတော့ လက်ဆောင်ရလာတာတဲ့။ ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်က ပေးတာလဲလို့ ငါနင့်ကိုမမေးခဲ့ပါဘူး ။ နင့်မျက်နှာလေးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ နှင်းဆီပန်းတွေကို နင်ဘယ်လောက် တပ်မက် နေတယ်ဆိုတာ ငါသိခဲ့ပါတယ်။ခရေ ကိုမှ ချစ်တယ်ဆိုတဲ့နင်က နှင်းဆီပန်းတွေ ရောက်တဲ့နေ့ကစပြီး ငါ့ခရေပန်းလေးတွေကို လျစ်လျူ ရှုခဲ့တယ်။ ငါ့ခရေပန်းလေးတွေ နင့်ဆံကေသာမှာ မပန်ဆင်ရပဲ ပိုင်ရှင်မဲ့ နွမ်းခြောက် ရပြီ။ ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး။နင့်ကိုငါ နားလည်ပါတယ် ။ နွမ်းခြောက်သွားပေမယ့်လည်းငါ့ခရေပန်လေးတွေ မွှေးပျံ့နေဆဲပါ။ ငါ နင့်ကိုမပေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ခရေပန်းလေးတွေ ကို အမှတ်တရအဖြစ်သိမ်းထားတာ ခုဆိုရင် ခရေပန်းထည့်တဲ့သေတ္တာလေးတောင် ပြည့်တော့မယ်။
နှင်းဆီဆိုတာ တော်ဝင်ပန်းပါ ချစ်သူ ။ နင်လိုချင်တက်မက်တာကို ငါအပြစ်မမြင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အခန့်မသင့်လို့ ဆူးစူးမှာကိုတော့ငါ စိုးရိမ်မိတယ်။
ခုဆိုရင် နင့်ဆံကေသာမှာ ငါ့ခရေပန်းလေးတွေ မမြင်ရတာ ရက်တွေကို လစားလို့ သက္ကရာဇ်တစ်ခုတောင်အသစ်ဖြစ်သွားပြီကောင်မလေးရေ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ ငါ့ရဲ့ခရေပန်းလေးတွေ နင့်ကိုခုထိ မျှော်လင့်နေတုန်းပါပဲ။ အခန့်မသင့်လို့ နင့်ကို နှင်းဆီဆူး တွေစူးခဲ့ရင် အဲဒီနှင်းဆီကို စွန့်ပြီး ခရေပင်လမ်းလေးကို ပြန်လာခဲ့ပါချစ်သူ ။ ခုတော့ခရေပင်ကြီးတောင် ပန်းကောက်မယ့်သူမရှိလို့ ပန်းတွေမပွင့်တာတောင် တော်တော်ကြာပြီ........။ပိုင်ရှင်မယ့်နွမ်းခြောက်နေတဲ့ ခရေကုံးလေးတွေ ကိုနင်လာကြည့်လှည့်ပါ။ ခုချိန်ထိ မွှေးပျံ့နေတုန်းပါပဲ ။ ပြန်လာကြည့်ရင်နင်သိမှာပါ...............။
ခုချိန်ထိ ငါ ခရေပန်းလေးတွေ သီနေတုန်းပါပဲချစ်သူ။
ငါ့ အချစ်ကို ဖွဲ့ဆိုခဲ့တယ်။
POSTED BY နွေမုန်တိုင်း9COMMENTS
ပျက်စီးသွားတဲ့ “နှလုံးသားမြို့တော်” ဟာ ပြန်လည်ပြုပြင်မယ့်သူ မရှိပဲ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုလုံး ဒီအတိုင်းပဲ ရှိနေခဲ့တယ်။နှလုံးသားမြို့တော် ဟာ သူ့ဒဏ်ရာတွေကို သူ့ကိုယ်သူ ကုစားပေမယ့် ဒဏ်ရာတွေက ထပ်ထပ်ပဲ တိုးလာခဲ့တယ် ။ နောက်ဆုံးတော့ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုပြီး သူ့ကိုယ်သူ ပစ်ထားလိုက်တယ်။ ဒီလိုနဲ့တစ်နေ့မှာ တော့ “နှလုံးသားမြို့တော်” ကိုနောက်ထပ်ဧည့်သည်တစ်ယောက်ထပ်ရောက်လာ ပြန်ပါတယ်။ ဧည့်သည်လို့သာသုံးနှုံးလိုက်ရတာ တစ်ကယ်တော့ ဒီတစ်ခါရောက်လာတာ ဧည့်သည်မဟုတ်ပါဘူး ။ “နှလုံးသားမြို့တော်” ကို ပြန်လည်တည်ထောင်မယ့် “နှလုံးသားမြို့တော်” ရဲ့ “ကယ်တင်ရှင်” လို့ပြောရင် ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။ သူ ဟာ “နှလုံးသားမြို့တော်” ကို
အရင်က တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးပါဘူး။ မရောက်ဖူးပေမယ့် “နှလုံးသားမြို့တော်” ရဲ့ အကြောင်းတွေကို အကုန်လုံး နီးပါးလောက်ကို သိနေ ခဲ့ပါတယ်။ အဲလိုသိအောင်လည်းသူက အရင်ဆုံး စုံစမ်းခဲ့တယ်။ မြို့တော်ကို ပြန်လည်တည်ထောင်ဖို့ ဘာတွေ လိုအပ်မလဲဆိုတာကို “နှလုံးသားမြို့တော်” ရဲ့ မလှမ်းမကမ်းကနေ အမြဲစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ ဒီလောက် ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ မြို့တော် ဟာ ဘာကြောင့် ပျက်စီးသွားရတာလဲဆိုတာကို သူ စဉ်းစားတယ်။ “နားလည်မှု”နဲ့“ကြင်နာမှု” တွေ မလုံလောက်ခဲ့လို့လား ဆိုပြီး အဖြေထုတ်တယ်။နောက်ထပ်တစ်ခါဒီလိုမဖြစ်ရအောင် သူ ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီး “နှလုံးသားမြို့တော်” ကို ပြန်လည်တည်ထောင်ဖို့အတွက်
လိုအပ်တာတွေ ပြည့်စုံတဲ့တစ်နေ့မှာ သူဟာ “နှလုံးသားမြို့တော်” ထဲကို ၀င်လာခဲ့ပါတယ်။ သူဝင်လာတဲ့အချိန်မှာ “နှလုံးသားမြို့တော်” ဆီမှာ ၀င်ခွင့်မတောင်းခဲ့ပါဘူး ။ သူ့သဘောနဲ့သူဝင်လာခဲ့တယ်။ သူဟာ “မြို့တော်” ကိုပြန်လည်တည်ထောင်ဖို့သိပ်ကိုစိတ်အား ထက်သန်နေခဲ့တယ်။သူ့ကြောင့် “နှလုံးသားမြို့တော်” ပြန်လည်အသက်ဝင်နိုးထလာမှာကို သူအရမ်းမျှော်လင့်တယ်။မျှော်လင့်တဲ့အတိုင်း ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့လည်း သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်နေတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ “နှလုံးသားမြို့တော်” ကိုပြန်လည်တည်ထောင်ဖို့ အတွက်သူ့မှာ အကုန်ပြည့်စုံ နေတယ်လေ။ လိုအပ်တာမှန်သမျှသူ့ဆီမှာ အကုန်ရှိနေပြီ။ “အချိန်တစ်ခု” ကိုပဲ သူစောင့်ရမှာ ။ သူ့ရဲ့ ညာဖက်လက်မှာ စစ်မှန်တဲ့ သစ္စာတရားရှိတယ်။ ဘယ်ဖက်လက်မှာ နွေးထွေးတဲ့ မေတ္တာတရား ရှိတယ်။ သူ့ရင်ဘတ်ထဲမှာ တော့ လတ်ဆတ်တဲ့ ရင်ခုန်သံတွေရှိတယ်။ နောက်ပြီးသူ့ဆီမှာ ကြင်နာဖေးမမှု၊အနွံတာခံမှု၊သည်းခံခွင့်လွှတ်မှု၊စာနာ နားလည်မှု နဲ့ အပြုံးချိုချို တွေ ရှိတယ်။ “နှလုံးသားမြို့တော်” ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးသော အသုံးဝင်ဆုံးသော ကိရိယာ တွေကိုပဲ သူယူလာခဲ့တယ်။ မလိုအပ်တဲ့ ၀န်တိုမှု ၊ ချုပ်ချယ်မှု ၊ တောင်းဆိုမှု ၊ စတာတွေကို “နှလုံးသားမြို့တော်”ရဲ့အပြင်ဖက်မှာ သူထားခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့သူဟာ အရင်ဦးဆုံး သူ့ရဲ့ညာဖက်လက်နဲ့ မြို့တော်ကို ထုဆစ် ပုံဖော်တယ်။ ဘယ်ဖက်လက်နဲ့ မြို့တော်ကို အသက်သွင်းတယ်။ သူ့ရင်ဘတ်နဲ့ အရာအားလုံးကို စိတ်တိုင်းကျ တည်ဆောက်တယ်။ “ကယ်တင်ရှင်” ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့် “နှလုံးသားမြို့တော်”ဟာ အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာ ပြန်လည်အသက်ဝင်လာခဲ့တယ်။ “နှလုံးသားမြို့တော်” အတွင်းမှာ သီချင်းတစ်ချို့ပျံ့လွင့်လာတယ်။ အချိန်အခါ မဟုတ်ပဲ ပန်းရနံ့တစ်ချို့ သင်းပျံ့လာတယ်။ ကဗျာတစ်ချို့ အိမ်လည်လာကြတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာအလှဆုံးသော ပန်းတွေ က “နှလုံးသားမြို့တော်” မှာ လာရောက် ဖူးပွင့်ကြတယ်။ ခုတော့ “နှလုံးသားမြို့တော်” က အသစ်တစ်ဖန်ပြန်ပြီး အသက်ဝင်ရှင်သန် ခဲ့ပါပြီ။ “ကယ်တင်ရှင်” ကို သူ အရမ်းကျေးဇူးတင်သွားတယ်။ “နှလုံးသားမြို့တော်” မှာရာသက်ပန်နေဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တယ်။ “ကယ်တင်ရှင်” မရှိရင် မဖြစ်တဲ့အကြောင်း ။“ကယ်တင်ရှင်”ကြောင့်ခုလို ပြန်လည်အသက်ဝင်လာရကြောင်း ၊ဒီမြို့လေးမှာပဲ နောက်ဆုံး ထွက်သက်ထိ နေသွားပေးဖို့ “နှလုံးသားမြို့တော်” က မေတ္တာရပ်ခံလိုက်တယ်။ အဲဒီတော့“ကယ်တင်ရှင်” က စဉ်းစားအုန်းမယ်ဆိုပြီး အဖြေပေးပါတယ်။ သူစဉ်းစားပြီးအဖြေရတော့“နှလုံးသားမြို့တော်” ကိုအဖြေပေးတယ်။ သူ “နှလုံးသားမြို့တော်”မှာ ရာသက်ပန် နောက်ဆုံးထွက်သက်ထိ နေသွားမယ့်အကြောင်း “နှလုံးသားမြို့တော်” ကိုပြန်လည်အဖြေပေးခဲ့တယ်။ “နှလုံးသားမြို့တော်” က ပျော်လွန်းလို့ “ဟေးးးးးးးးးးး” လို့အော်လိုက်မိတယ်။ အဲဒီတော့ “ကယ်တင်ရှင်” က “နှလုံးသားမြို့တော်” ကို မျက်စောင်းလှလှလေး တစ်ချက်ထိုးပါတယ်။ ဒီနေ့ က “နှလုံးသားမြို့တော်“ အတွက် အမှတ်တရ နေ့လေးတစ်နေ့ပါပဲ ။ ခုချိန်ထိမှတ်မိနေတုန်းပါပဲ။ အဲဒီနေ့ ကတော့ 2005 April 18 ရက်နေ့ ........ အဲဒီနေ့ကို “နှလုံးသားမြို့တော်” ရဲ့ နှစ်ပတ်လည်နေ့လို့ “ကယ်တင်ရှင်” နဲ့တိုင်ပင်ပြီး သတ်မှတ်လိုက်တယ်။ လာမယ့် April 18 ဆိုရင် “နှလုံးသားမြို့တော်” ရဲ့ နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်သလို “ကယ်တင်ရှင်” က “နှလုံးသားမြို့တော်” မှာ ရာသက်ပန်ရိုးမြေကျနေမယ့်အကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးမယ့်နေ့လေးတစ်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။
POSTED BY နွေမုန်တိုင်း4COMMENTS
အတူထိုင်ဖူးတဲ့ ကော်ဖီဆိုင်လေးရဲ့ အတူထိုင်ဖူးတဲ့ ထိုင်ခုံလေးမှာ ငါအခု ထိုင်နေတယ်ချစ်သူ။
မပြောင်းလဲ့တဲ့ဒီဆိုင်လေးက မပြောင်းလဲသေးတဲ့ တေးသီချင်းလေးတွေကို ခုထိဖွင့်ထားတုန်းပါပဲ။
ပြောင်းလဲသွားတာက နင် တစ်ယောက်မရှိတော့ပါပဲ။
ဆိုင်စားပွဲထိုးလေးက လောကွတ်စကားဆိုပါတယ် အစ်မ မပါဘူးလား အစ်ကို တဲ့။
တစ်ဖက်လူက လောကွတ်စကား လို့ဆိုပေမယ့် ငါ့အတွက်တော့ ခံစားမှု ဒီဂရီတွေက
ကျေးဇူးပြု၍ တစ်ယောက်တည်းနေခွင့်ပြုပါ ။ မှာထားတဲ့ကော်ဖီကို
သောက်မယ်လုပ်တော့ ကော်ဖီခွက်ထဲမှာ မင်းမျက်နှာ ပေါ်လာပြန်တယ်။
ဒါနဲ့ပဲ ပိုက်ဆံရှင်းပြီး ဆိုင်ထဲကနေထွက်လာလိုက်တယ် ။ စားပွဲထိုးကောင်လေးက နောက်ကလိုက်လာပြီး
အစ်ကို ကော်ဖီက တစ်ခွက်ဖိုးပဲလေ ဆိုပြီး ပိုနေတဲ့ငွေကို ပြန်အမ်းတယ်။
ဒီလိုနဲ့လျှောက်လာရင်း ဘယ်သွားရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီး စဉ်းစားတယ်။
လို့စဉ်းစားပြီး ဘုရားပေါ်တက်လာလိုက်တယ်။ ပန်းရောင်းတဲ့ကောင်မလေးက
အစ်ကို ပန်းမ၀ယ်တော့ဘူးလား တဲ့ ။
ဒီနေ့အစ်မ မပါဘူးနော် တဲ့။ ဟူး သေသာသေလိုက်ချင်တော့တယ်။
ဒါနဲ့ပဲ သူ့ကိုပြုံးပြပြီး ပန်းတစ်စည်းဝယ်လိုက်တယ်။
စနေထောင့်သွားပြီး မပြည့်နိုင်တော့တဲ့ ဆုကိုတောင်းလိုက်မိတယ် ။ ချစ်သောသူနဲ့ ရာသက်ပန် ရိုးမြေကျ ပေါင်းရပါစေ လို့ ။ ခါတိုင်းဆိုရင်တော့ ဘုရားရင်ပြင်ပေါ်မှာ နှစ်ယောက်တူတူ ဆုတွေတောင်းလိုက်ကြတာ နာရီဝက်လောက်ကြာပါတယ်။ ခုတော့ လိုချင်တောင့်တ တဲ့ဆုတစ်ခုကို တောင်းလိုက်ပြီး ဘုရားရင်ပြင်ပေါ်ကနေဆင်းလာလိုက်တယ်။
ခုချိန်ထိနင်ကတော့ငါ့အနားမှာ ရှိနေတုန်းပဲ ချစ်သူ။ ကျေကွဲစရာတွေ နဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ငါ
ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာတွေကိုဘယ်မှာ လိုက်ရှာရမလဲ ချစ်သူ ?
အခုငါဘယ်သွားရမလဲ? မထူးတော့ပါဘူး အိမ်ပဲပြန်တော့မယ်။
အရာအားလုံးမေ့ပြီးခဏလောက်အိပ်ပစ်လိုက်တယ်။ မင်းက အိပ်မက်ထဲထိရောက်လာပြန်တယ်။
မင်းကိုသတိရတိုင်းသာ ပန်းတစ်ပွင့် ပွင့်မယ်ဆိုရင် ဒီကမ္ဘာကြီးပန်းတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေလောက်ပြီချစ်သူ။
သတိရတိုင်းမျက်ရည်ကျရလို့ ငါ့မှာ မျက်ရည်တွေလည်းခမ်းခြောက်ကုန်ပြီ။
ရူးတယ်လို့ ဆိုချင်ဆိုတော့ ငါနင့်ကိုတစ်ရက်မှ မမေ့ဘူးချစ်သူ။ အမှတ်တရပေါင်းများစွာ အုတ်မြစ်ချပြီးမှ
ဘာကြောင့်ငါ့အနားက ထွက်သွားရတာလဲ? ရက်စက်တဲ့လောကဓံတရားကြီးက ဘာဖြစ်လို့မင်းတစ်ယောက်ကိုမှ ရွေးပြီး
ခေါ်သွားရတာလဲ? ဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်မလာတာကိုက ငါတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အတိတ်ကံလား? ကမ္ဘာတစ်ဖက်မှာ နင်ရှိသလို ကမ္ဘာတစ်ဖက်မှာ ငါရှိတယ်။ စိတ်မပျက်နဲ့ ချစ်သူ တစ်နေ့နေ့ ငါတို့နှစ်ယောက် ဆုံနိုင်မှာပါ။ ရောက်နေတဲ့နေရာလေးမှာ နင်ပျော်အောင်နေပါ ။ ငါ့အတွက်လည်းနင် စိတ်မပူနဲ့ ။ တို့နှစ်ယောက်ခဏလေး ဝေးတာလို့ သဘောထားလိုက်ပါ ။
ပြန်ဆုံကြမယ့်တစ်နေ့ရောက်ရင်သာ နင်ငါ့ကို အရင်လိုချစ်ခွင့်လေးတော့ ပြန်ပေးပါ လို့ ငါတောင်းဆိုချင်တယ်။
ဒါပေမယ့်................. ပြန်တွေ့ကြတဲ့ တစ်နေ့ ......................နင်ငါ့ကို မှတ်မိပါအုန်းမလား???
p-s: သူမကျွန်တော့်ကို တစ်ကယ်နှုတ်မဆက်ခဲ့ပါဘူး။
အလွမ်း နဲ့အဆုံးသတ်မယ်မှန်းကြိုသိခဲ့ရင် ကျွန်တော့်ရင်ခွင်တစ်ခုလုံးကို ဘာလို့ ပုံအပ်ခဲ့မှာလဲ။ခုတော့...........
ဥသြ တွေတောင် တေးဆိုကုန်ပြီ။ လေရူးတွေလည်းတိုက်ကုန်ကြပြီ။ရင်ခွင်မှာလည်းခြစ်ခြစ်တောက်အောင်ကို ပူနေပြီ။
ကျေးဇူးပြု၍ အေးမြလတ်ဆတ်သော မေတ္တာတရားတွေ နဲ့ ငါ့ကို ကုစားပါချစ်သူ..
မင်းအတွက်ဆိုပြီး ပေးဆပ်ခဲ့တဲ့ ငါ့နှလုံးခုန်သံတစ်ချို့ ရေခဲမြစ်ထဲမှာ မြုပ်နေတာမင်းတွေ့လိမ့်မယ်။
အလွမ်းသီချင်းတွေ ဆိုနေတဲ့ အိပ်ပျက်ညတွေကို မင်းတွေ့လိမ့်မယ်။
ကြေမွ ပြဲစုတ်နေတဲ့ ဒိုင်ယာရီတွေ မင်းတွေ့လိမ့်မယ်။ကာရံမညီတဲ့ ကဗျာအပိုင်းအစတွေမင်းတွေ့လိမ့်မယ်။
ငါတို့နှစ်ယောက် တိမ်တွေစီးပြီး ဟိုး အဆုံးမရှိတဲ့ ခရီးကိုသွားခဲ့ဖူးတယ်။
ငါတို့နှစ်ယောက် ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးကိုလည်းဖြတ်ဖူးတယ်။ငါတို့နှစ်ယောက် တောင်တွေဖြတ်ပြီး သီချင်းတွေလည်း
ညည်းခဲ့ဖူးတယ်။နှစ်ယောက်အတူရှိစဉ်တုန်းက အရာအားလုံးကို ရင်ဆိုင် နင့်အတွက်ငါ သူရဲကောင်းတစ်ယောက်
ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ခုချိန်မှာတော့ ဒါတွေဟာ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်သွား ပြီလား?
အရာအားလုံးမင်းအတွက် လှပခဲ့တဲ့ ဒီအတိတ်ကို မင်းဘာကြောင့်စွန့်ခွါရတာလဲ???
`အတိတ်´ဆိုတဲ့ပန်းခင်းလေးကြောင့် `အနာဂတ်´ဆိုတဲ့ဥယျာဉ်ကြီး လှပရတာပါ။
သီးပွင့်တော့မယ့်အချိန်ရောက်မှ ဘာကြောင့်ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ရတာလဲ ကောင်မလေးရယ်?
အပြစ်မတင်ရက်တဲ့ငါ ကံကြမ္မာကိုပဲ ယိုးမယ်ဖွဲ့လိုက်ပါတော့မယ်။ ပျော်ပါစေချစ်သူ....
အရာရာကိုကျော်ဖြတ် ရင်ဆိုင်မယ့် နင့်အတွက်ဆိုပြီး ပေးဆပ်ခဲ့တဲ့ငါ......
ခုတော့ ဒဏ်ရာတွေ ဗလပွ နဲ့ ကျန်ရစ်ဖြစ်ခဲ့တာ သိပ်တော့လည်းမထူးဆန်းပါဘူး။
ကျန်ခဲ့တဲ့ရက်စွဲတွေ ပြန်လှန်ကြည့်ရင် နေ့တိုင်း ရက်ရာဇာ တွေပါပဲချစ်သူ။မနေ့ကအချိန်ထိပေါ့။
POSTED BY နွေမုန်တိုင်6းCOMMENTS
အဆက်မပြတ်ခေါက်နေတဲ့တံခါးခေါက်သံကြောင့် သော့ပေါက်ကနေ အပြင်ဖက်ကို
အလို......အိပ်မက်တွေ တစ်ပွေ့တစ်ပိုက်နဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ စိတ်ကူးနတ်သမီးလေးကို
တအံ့တသြ တွေ့လိုက်ရတယ်။ သူမ ဘာလာလုပ်တာပါလိမ့်..???
ကျွန်တော်သူမဆီကို ၀င်ခွင့်တောင်းခဲ့တုန်းက သူမ ကျွန်တော့်ကို မသိချင်ယောင်
ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ခုတော့ သူမ ကကျွန်တော့်ကိုဝင်ခွင့်တောင်းနေပြီ။
နှလုံးသားက ၀င်ခွင့်ပြုဖို့ ဖိအားပေးနေပေမယ့် ဦးနှောက်က ခပ်တည်တည်လုပ်နေတယ်လေ။
ဒါနဲ့ပဲနောက်ဆုံး ကျွန်တော် ဦးနှောက်ကို လျစ်လျူရှု့လိုက်တယ်။
နှလုံးသား အလိုကျ သူမကို ကျွန်တော်ဝင်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်။
သူမအပြုံးတစ်ချက်ကို ကျွန်တော့်အတွက်ခြွေချပြီး ညင်သာစွာ ၀င်လာခဲ့ပါတယ်။
သူမ ရောက်တဲ့အချိန်မှာပဲ ကျွန်တော် အနာဂတ်စားပွဲ တစ်ခုကို ခင်းလိုက်တယ်။
နောက်ပြီး အဲဒီအပေါ်မှာ အကြင်နာ၊အိပ်မက်၊မျှော်လင့်ချက်၊လက်တွေ့ဘ၀၊နားလည်မှု...
စတာတွေနဲ့ သူမကို တည်ခင်းဧည့်ခံလိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီး.....
အဲဒါတွေ စားသုံးဖို့ သူမ လက်ထဲကို အချစ် ဆိုတဲ့ဇွန်းတစ်ချောင်း ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံး သူမ အကြင်နာ ကိုစတင်မြည်းစမ်းလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က ဘယ်လိုနေလဲ
ဆိုတော့ သူမ ကချိုပါတယ်တဲ့။ နောက်ပြီး သူမ အိပ်မက် တွေကို ခပ်သောက်လိုက်တယ်...
ပြီးတော့ အတိုင်းမသိအောင်ကြည်နူးရတယ်တဲ့။နောက်တစ်ခါ မျှော်လင့်ချက်တွေကို သူမ စားကြည့်တယ်
အဲဒါအားဆေး တစ်ခွက်လားတဲ့ ကျွန်တော့်ကို မေးတယ် ။ ကျွန်တော်ပြုံးရုံ ပြုံးပြလိုက်ပါတယ်။
နောက်ပြီးတော့ လက်တွေ့ဘ၀ ကိုသူမ နည်းနည်းမြည်းကြည့်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲ သူမ နှာခေါင်းရှုံ့ပြီး
ပြန်ထွေးထုတ်မယ်လို့ လုပ်ပါတယ် ။ ပါးစပ်ကလည်း ခါးလိုက်တာ ဆိုပြီး သူမ ဆိုပါတယ်။
ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်း ခါးတယ်ဆိုပေမယ့် ထွေးတော့မထုတ်လိုက်ပါနဲ့ မြိုချလိုက်နော် လို့ ဆိုတော့
သူမ ကျွန်တော့်မျက်နှာ ကြည့်ပြီး အောင့်အည်း မြိုချလိုက်ပါတယ်။ သူမ တော်တော်လည်းခါးသွားမှန်း
ကျွန်တော်သိလိုက်တယ်။ဒါပေမယ့် သူမ မြိုချလိုက်တာကိုတွေ့တော့ ကျွန်တော့်ရင်မှာ အတိုင်းမသိအောင်
ပီတိတွေ ဖြစ်ရတယ်။ ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးသူမကို နားလည်မှု တစ်ခွက်တိုက်လိုက်တယ်။ အားလုံးထဲမှာ အကောင်းဆုံး
ပဲလို့ သူမ ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော် သူ့ ကိုတစ်ခုခုပြောမလို့စဉ်းစားနေပါတယ် ။
ကျွန်တော့်ရဲ့ နာရီနှိုးစက်သံကြောင့် အိပ်မက် ထဲကနေ လန့်နိုးသွားတယ်ဗျာ။
ကျွန်တော် စဉ်းစားနေတာက ဒါတွေဟာ အိပ်မက် မဟုတ်ရင်သိပ်ကောင်းမှာပဲ လို့သူမ ကိုပြောမလို့ပါပဲ။
`နားလည်မှု´ နဲ့ `ကြင်နာမှု´ နှစ်ခုပေါင်းပြီးတည်ဆောက်ထားတဲ့ `နှလုံးသားမြို့တော်´ ဆိုတဲ့ မြို့လေးတစ်မြို့ ရှိသတဲ့။ အဲဒီမြို့လေးက တည်ငြိမ်အေးချမ်းတော့ လာလည်ချင်တဲ့သူတွေ အများကြီးပေါ့။ ဒါပေမယ့်အဲဒီမြို့ကို လာလည်ချင်တိုင်း လာလို့မရဘူးတဲ့။ အဲဒီမြို့ရဲ့စည်းကမ်းချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှ
အဲဒီမြို့ကို ၀င်ခွင့်ရတယ်တဲ့ ဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့လူတိုင်းက `နှလုံးသားမြို့တော်´ ကို
၀င်ရောက်လည်ပတ်ချင်ပေမယ့် စည်းကမ်းချက်တွေ မလိုက်နာနိုင်လို့အဝေးကပဲ ကြည့်သွားကြသတဲ့။
(၃) ရင်ခုန်သံတွေလတ်ဆတ်ရမည်။ တဲ့.........
စည်းကမ်းချက်တွေက အပေါ်ယံကြည့်ရင် လိုက်နာဖို့လွယ်ကူတယ်လို့ထင်ရပေမယ့် တစ်ကယ်တမ်းလိုက်နာ ဖို့အတွက်ခက်ခဲလွန်းတော့ `နှလုံးသားမြို့တော်´ ကြီးမှာဧည့်သည်မလာပဲ အထီးကျန်နေတာပေါ့။
အဲဒီဧည့်သည်ဟာ စည်းကမ်းချက်တွေ ကိုလိုက်နာနိုင်လို့ ရောက်လာတာပဲဆိုပြီး
`နှလုံးသားမြို့တော်´ က နွေးထွေးစွာနဲ့ကြိုဆို လိုက်တယ်။ဒါပေမယ့်အဲဒီဧည့်သည်က
ခြွင်းချက်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ ရင်ခုန်သံတစ်ချို့မလတ် ဆတ်တော့ပါဘူး။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ ရောက်လာပြီပဲ ကိုယ့်ဖက်ကဧည့်ဝတ်ကျေရမှာပေါ့ဆိုပြီး
`နှလုံးသားမြို့တော်´ ကြီးက ဧည့်သည်ရောက်တဲ့နေ့ကစပြီးအမှုတော်ထမ်းရွက်ပါတော့တယ်။
`နားလည်မှု´ နဲ့ `ကြင်နာမှု´ ကိုလည်းသေချာမှာထားတယ်။
တစ်ကယ်တမ်းလည်း `နှလုံးသားမြို့တော်´ ကြီးက
ဧည့်သည်အပေါ်မှာ အင်မတန်မှ ဧည့်ဝတ်ကျေခဲ့ပါတယ်။
`နှလုံးသားမြို့တော်´ရဲ့ ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်မှုကြောင့် ဧည့်သည်ရဲ့ ရင်ခုန်သံတစ်ချို့
`နှလုံးသားမြို့တော်´ ကတော့ သူ့ကြောင့်ဧည့်သည်ပျော်ရွှင်နေတာကို မြင်ရတော့
ကျေနပ်နေတာပေါ့။ ဖြစ်နိုင်ရင်ဧည့်သည်ကို သူ့ဆီမှာတစ်သက်လုံး နေစေချင်တယ်လေ...
`နှလုံးသားမြို့တော်´ ငိုင်နေတာကို `နားလည်မှု´ နဲ့ `ကြင်နာမှု´
ဧည့်သည်မရှိတော့ဘူးတဲ့။ မင်းတို့ ဧည့်သည်ကို သေချာဂရုမစိုက်ဘူးလားလို့မေးတော့
`နားလည်မှု´ က ကျွန်တော်သူ့ကိုဂရုစိုက်ပါတယ်။
သူ ဘာပြောပြော ဘာလုပ်လုပ် ဘာမှပြန်မပြောပဲ ပြုံးပြုံးလေးနဲ့
သူ့ကိုပဲကြည့်နေခဲ့ပါတယ် တဲ့။ `ကြင်နာမှု´ ကလည်း ကျွန်တော်လည်း
ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ တာချည်းပါပဲတဲ့။ အဲဒီတော့ `နှလုံးသားမြို့တော်´ ကစဉ်းစားတယ်။
ဒီလောက်ဧည့်ဝတ်ကျေနေပါရက်နဲ့ ဘာဖြစ်လို့ ဧည့်သည်က ပြန်သွားရတာလဲပေါ့။ သူတို့သုံးဦး ခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီးစဉ်းစားတယ်။နောက်ဆုံးတော့ အဖြေတစ်ခုရသွားတယ်။
ဧည့်သည်ဆိုတာ အချိန်တန်ရင်အိမ်ပြန်မှာပဲ ဆိုတာကိုပေါ့။
အဲဒီဧည့်သည်ပြန်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းကစပြီး `နှလုံးသားမြို့တော်´ လည်းရင်ကွဲနာကျပြီးပျက်စီးသွားသတဲ့။
p-s: လွန်ခဲ့သော ၇ နှစ်တာကာလကပေါ့.......။
POSTED BY နွေမုန်တိုင်3းCOMMENTS
အမှတ်တမဲ့ ဆိုပြီး ထားရစ်တဲ့သူက
အမှတ်တရ ပေါင်းများစွာနဲ့ ကျန်ရစ်ခဲ့တာ
POSTED BY နွေမုန်တိုင်း0COMMENTS
နေ့ ည တွေ ကဗျာမဆန်တော့တာ
မင်းကတော့ ခုချိန်ထိ ရှိနေသေးတယ် ချစ်သူ......။
ကြင်နာမှုတွေနဲ့ လက်ကမ်းလို့ ကြိုနေမယ်
တစ်ချိန်က မင်းရဲ့အိမ်လေး .....။
ကမ္ဘာတစ်ဖက်စီခြားခဲ့ပြီချစ်သူ တစ်ခါတစ်ရံငါသတိရတဲ့အခါ ပျော်ဖူးခဲ့တဲ့အတိတ်ကို စိတ်ထဲမှာ
တို့နှစ်ယောက်ရဲ့အတိတ်ကိုတို့နှစ်ယောက်ပိုင်ခဲ့သလို . တို့နှစ်ယောက်ရဲ့အနာဂတ်ဟာလဲ
နားလည်မှုတွေ ကြင်နာမှုတွေ ကူညီဖေးမခဲ့မှုတွေ ဒါတွေက်ိုငါဘယ်မှာလိုက်ရှာရမလဲ.ဖြေပါချစ်သူ.
တယုတယနဲ့ပျိုးခဲ့ရတဲ့ငါ့ရဲ့နှင်းဆီအိပ်မက်တွေ ရေပေါ်အရုပ်ဆွဲသလိုဖြစ်ကုန်ပြီ. ပြန်လာခဲ့ပါလို့
မျှော်လင့်ခွင့်မရှိတော့ပေမယ့် မင်းအိမ်ပြန်လာမယ့်နေ့ ရက်တွေကိုငါကတော့ ရူးသွပ်စွာနဲ့ဒီနေ့ထိ
တော့ငါလိုက်လာမှာပါချစ်သူ ..ဖမ်းဆုတ်မရတော့တဲ့ ငါတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ မျှော်လင့်ခြင်းတွေကို ဒီမျှနဲ့ပဲ
အဆုံးသတ်ခွင့်ပေးပါချစ်သူ..လွမ်းလွမ်းဆွေးဆွေးနဲ့ငါရင်ကွဲနေချိန်မှာမင်းကတော့ဒါတွေကို မသိနိုင်တော့ပါဘူး..ကမ္ဘာတစ်ဖက်မှာမင်းပျော်ရွှင်စေဖို့ ငါဆုတောင်းပေးပါတယ်ချစ်သူ..
တစ်နေ့တော့ငါမင်းနဲ့ ဆုံနိုင်ကောင်းပါတယ်... တစ်နေ့နေ့ပေါ့.........။
`သူ´က ဘယ်နေရာမဆို တော်တော်လေးအရေးကြီးတဲ့ အရာတစ်ခုအဖြစ် ဖြစ်တည်နေတယ်ဆိုတာ သင်လည်း သိမှာပါ။ `သူ´မရှိရင် အရာရာမှာ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ ဘာပဲလုပ်လုပ် ဘ၀င်မကျနိုင်ပါဘူး။ `သူ´က သင့်ကို ဟိုးအမြင့်ကြီးရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်သလို ဟိုးအောက်ဆုံးရောက်အောင် ဆွဲချ သွားနိုင်တယ် ဆိုတာ သင်သိပါလိမ့်မယ်။ အရာရာမှာအောင်မြင်နိုင်ဖို့ ဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးသင် `သူ့´ ကိုခင်မင်တတ်အောင်ကြိုးစားရပါမယ်။ `သူ´ က မိသားစုကြားမှာလည်းအရေး ပါတယ်။ အသိုင်းအ၀ိုင်းကြားမှာလည်း အရေးပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းအရေးပါတယ်။ လူငယ်ကြားမှာ လည်းအရေးပါတယ်။ လူကြီးတွေကြားမှာလည်းအရေးပါတယ်။ ချစ်သူတွေကြားမှာလည်းအရေးပါသလို အိမ်ထောင် တစ်ခုမှာလည်း အရေးပါတယ်။ `သူ´ ဟာ အရာရာမှာ ပိုင်ဆိုးသူပါ။ နောက်ဆုံးသင်နဲ့ ကျွန်ုပ်ကြား မှာလည်းသူက အရေးပါတယ်ဆိုတာ သင်မမေ့ထားပါနဲ့။ `သူ´ မရှိရင် သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရှေ့ဆက်လို့ ရမှာမဟုတ် တော့ဘူး ။ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေတွေအဖြစ်နဲ့ ကိုဆိုလိုတာပါ။ `သူ့´ ကြောင့်ကျွန်တော့်ဘ၀ကြီး အကြိမ်ကြိမ် သေခဲ့ရဖူးသလို `သူ့´ ကြောင့်ပဲကျွန်တော့်ဘ၀ကြီး အနာဂတ်အိပ်မက်တွေ မက်ခွင့်ရခဲ့ဖူးတယ်။ `သူ့´အတွက်နဲ့အကြိမ်ကြိ်မ်လဲကျပြိုပျက်သွားသူတွေကို `သူ´ကပဲ ပြန်ပြီးဖေးမကူညီနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်အရာ တွေလဲကျရှုံးနိမ့်ပါစေ `သူ´ကတော့ဘယ်တော့မှမရှုံးပဲ အရာအားလုံးကို ခပ်ပြုံးပြုံးနဲ့နွေးထွေးစွာကြိုဆိုနေသူပါ။
`ဟဲလို´ ဆိုတဲ့ အသံလေးကိုကြားလိုက်ရင် ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာတော်တော်လေးကို ကြည်နူးရတယ်။ ကျွန်တော် နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တစ်ဦးတစ်ယောက်ဆီက ပြောလာမယ့် အသံလေးကိုဆိုလိုတာပါ။ ကျွန်တော်နဲ့သူမ တစ်ရက် ကိုအနည်းဆုံး သုံးခါလောက် ဖုန်းပြောဖြစ်တယ်။မနက်စောစော တစ်ခါ နေ့လည်တစ်ခါ နဲ့ ညအိပ်ရာဝင်ခါနီး တစ်ခါ ပါ။တစ်ခါပြောရင်အနည်းဆုံး တစ်နာရီလောက်တော့ကြာပါတယ်။ ညအချိန်ဆိုရင်တော့ ဒီ့ထက်ပိုပါပြီ။ အဲဒီလောက်တောင်ပြောနေတာ တစ်ရက် တစ်ရက် ဘာတွေပြောလဲလို့ မေးလာမယ့်လူရှိရင် ကျွန်တော်မဖြေ တတ်ပါဘူး။ ချစ်သူကောင်မလေးနဲ့ဖုန်းပြောနေတဲ့သူတွေ နားလည်ပါလိမ့်မယ်။ သူမနှုတ်ဖျားကထွက်လာတဲ့ `ဟဲလို´ဆိုတဲ့ အသံလေးက ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အချစ်သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါပဲ။အဲဒီအသံလေးကို ကျွန်တော် နေ့တိုင်းနားထောင်နေပေမယ့် တစ်ရက်မှ မရိုးသွားပါဘူး။ သူက အိပ်မက်တွေကို ဆက်လက် ရှင်သန်စေသလို ညကောင်းကင်မှာ ကြယ်တွေကို အစွမ်းကုန် လင်းလက်စေပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ဖုန်းမဆက်ဖြစ်တဲ့နေ့ရက် တစ်ချို့ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒီနေ့တွေဟာ ကျွန်တော့် အတွက် တော့သူမနဲ့ပက်သက်ပြီး အိပ်ပျက်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်တွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်တစ်နေ့မှာ သူမ နှုတ်ဖျားက ထွက်ပေါ်လာပြီး လေလှိုင်းကြားကတစ်ဆင့် ကျွန်တော့်နားထဲကို METAL သံတစ်ခုအဖြစ်နဲ`ဟဲလို´ ဆိုတဲ့ အသံလေးကိုကြားလိုက်ရရင်တော့ ညက အိပ်ပျက်ခဲ့တာတွေဟာ အလိုလိုပြေပျောက်သွား ရလောက်အောင် ကျွန်တော့်ကိုသူမ စွမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့သူမ ဖုန်းပြောလာတာခုဆိုရင် တစ်နှစ်ကျော်လောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ လူချင်းတွေ့ နေရပေမယ့် ဖုန်းတော့နေ့တိုင်းပြောဖြစ်ပါတယ်။ သူမနှုတ်ဖျားက `ဟဲလို´ဆိုတဲ့အသံလေးကို ကျွန်တော် တစ်ရက်မကြားရရင် အိပ်မပျော်လို့ပါ။ နောက်နေ့ပေါင်းများစွာမှာ လည်းကျွန်တော်နဲ့သူမ ဖုန်းပြောနေအုန်းမှာပါပဲ။ ဟော ပြောရင်းဆိုရင်းဒီ Post လေးကိုရေးနေတုန်း သူမဖုန်းခေါ်လာပါပြီ။ `ဟဲလို´ တဲ့ ။ တော်ပြီဗျာ ကျွန်တော် သူမနဲ့ ဖုန်းပြောလိုက်ဦးမယ် ...........။
p.s -ကျွန်တော်နဲ့သက်ဆိုင်သော `ဟဲလို´ လေးပါ.....။
သူမနဲ့ကျွန်တော်အပြင်မှာတစ်ခါမှမတွေ့ဖူးပါဘူး။ဆိုလိုတာက သူမနဲ့ကျွန်တော့်ကိုသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က မိတ်ဆက်ပေးတာပါ။အဲလိုမိတ်ဆက်ပေးတာကလည်း အခုခေတ်ရဲ့မရှိမဖြစ် အင်တာနက်အွန်လိုင်းပေါ်မှာ။အဲဒီ တော့ သူမကိုကျွန်တော် အပြင်မှာမမြင်ဖူးပါဘူး။ သူမရဲ့ PHOTO ကိုတော့သူမ ပြလို့မြင်ဖူးသလို ကျွန်တော့် PHOTO ကိုလည်းသူမ မြင်ဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် အပြန်အလှန်စကားတွေပြောရင်း တော်တော် လေးကိုနားလည်မှုတွေ ရှိခဲ့ကြပါတယ်။သူမနဲ့ကျွန်တော်က တော့မိုင်ပေါင်းထောင်ချီပြီးဝေးပါတယ်။ကျွန်တော် နေတဲ့ နေရာလေးက Goodnight လုပ်တဲ့အခါ သူမဖက်တော့ Goodmorning ပေါ့။ဒါပေမယ့်သူမနဲ့ကျွန်တော် က ဟိုးအရင်တုန်းက မြို့လေးတစ်မြို့မှာ အတူတူ နေခဲ့ကြတဲ့သူတွေပါ။အဲဒီတုန်းကမသိခဲ့ကြပဲ တစ်ယောက် တစ်နေရာဆီ နေကြတဲ့ခုခါကျမှ သူမ နဲ့ ကျွန်တော်သိခွင့်ရတဲ့ အဖြစ်လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ အံ့သြမိပါတယ်။
သူမနဲ့ကျွန်တော် လူမျိုးချင်းတူပေမယ့် ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသားတရားချင်းမတူပါဘူး။ အဲဒီအရာက ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ကြားမှာတော့ ကြီးမားတဲ့ တံတိုင်းကြီး တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့လိမ့်မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် စောစောကတည်းက သိခဲ့ပေမယ့်သိသိကြီးနဲ့ ပဲ ရှေ့ဆက်တိုးခဲ့ပါတယ်။ သူမနဲ့ကျွန်တော်ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြ ပါတယ်။
သူမက ကျွန်တော့်ကို အစွမ်းကုန်နားလည်ပေးပါတယ်။အဝေးကြီးမှာနေပြီး တစ်အိမ်ထဲမှာအတူနေတဲ့ လူတစ်ယောက်လို ကျွန်တော့်ကို ဂရုတစိုက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမနဲ့ကျွန်တော် ချစ်သူတွေဖြစ်ပြီး တစ်လလောက်မှာ ကျွန်တော် နဲ့သူမ ဘာသာအယူဝါဒတွေအကြောင်းဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့တယ်။သူမ နဲ့ ကျွန်တော် ဘယ်လိုမှ ညှိလို့ မရပါဘူး။ ဘာသာမတူရင်မချစ်ရဘူးလို့တော့ပညတ်ချက်တွေ မရှိပေမယ့် ဘ၀တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက် တော့ ကျွန်တော်စဉ်းစားရပါပြီ။
ဒါဆိုကျွန်တော်ဘယ်လို ဆက်လုပ်ရမလဲ ။
သူမ နဲ့ကျွန်တော့်အတွက်အကောင်း ဆုံးအဖြေက လမ်းခွဲဖို့ ကလွဲပြီး ဘာရှိတော့မှာလဲ???
တစ်နေ့ကျွန်တော်နဲ့သူမ စကားပြောတော့ ကျွန်တော် က လမ်းခွဲဖို့အကြောင်းကိုစပြောတယ်။ သူမ က ဘာဖြစ်လို့လဲ လို့ မေးတယ်။ ကျွန်တော်သူမကိုမရှင်းပြနိုင်ခဲ့ ပါဘူး။
မေ့လိုက်ဖို့အကြောင်းကိုပဲ နှုတ်က အကြိမ်ကြိမ် ပြောနေခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်သူမ ကိုတစ်ကယ်ချစ်ခဲ့ တယ်ဆိုတာ သူမ သိသလို သူမရဲ့အချစ်ကိုလည်းကျွန်တော် နားလည်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူမ နဲ့ ကျွန်တော် ရှေ့ဆက်ဖို့က သူမဖက်ကလျှော့ပေးမှာမဟုတ်သလို ကျွန်တော့်ဖက်ကရော???
ခုလောက်ဆိုရင် သူမနဲ့ကျွန်တော် ဘာကြောင့်လမ်းခွဲ ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ သူမ သိလောက်ရောပေါ့.............။
ဒီနေ့ ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော့်ကောင်မလေး အဆင်မပြေဖြစ်တယ်ဗျာ.သိပ်မကြာခင်အချိန်အတွင်းမှာလက်ထပ် တော့မယ့် ကျွန်တော့်ချစ်သူက ကျွန်တော့်ကို နားမလည်နိုင်သေးတာ ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူး ဖြစ်နေတယ်။သူက ကျွန်တော့်ထက် လေးနှစ်လောက်တော့ငယ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်သူမကို ချစ်သူလိုရော ညီမ လေးတစ်ယောက်လိုပါ ဂရုတစိုက်နဲ့ ချစ်လာခဲ့တာ ခုဆိုရင် သုံးနှစ် သုံးမိုးတောင်ရှိတော့မယ်။ သူမနဲ့ကျွန်တော် အဆင်မပြေဖြစ်တာခုမှမဟုတ်ပါဘူး ဟိုးအရင်ကတည်းကပါ။
သူမက ကလေးတစ်ယောက်လို ကျွန်တော့်အပေါ် ဆိုးတယ်။ဆိုးစမ်းပါစေ ကျွန်တော်နားလည်ခွင့်လွှတ်လို့ရတာပေါ့။ပြီးတော့သူမက ဘာမဟုတ် တာလေးတွေက အစ ကျွန်တော့်ကို ချုပ်ချယ်တယ်။ဥပမာ.ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းကောင်မလေးတွေနဲ့ အတူတူ တွေ့ရင်ရှေ့မှာတော့ဘာမှမပြောပါဘူး။မျက်နှာလေးကပြုံးလို့ ။သူအဲလိုပြုံးပြီးဆိုရင် ကျွန်တော်နာပြီလို့သာ မှတ်ပေတော့။နောက်ကွယ်ရောက်ရင်ကျွန်တော့်ဗိုက်ခေါက်ကိုလိမ်ဆွဲ ပြီးရှင်က ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်ဆို ပြီး ပြဿနာရှာတော့တာပါပဲ။ အဲဒီခါကျရင်ကျွန်တော်ကလည်း နားလည်မပေးရကောင်းလားဆိုပြီး သူ့ကိုပြန်ပြီး စိတ်ဆိုးတာပေါ့။ အဲဒီခါကျတော့သူမက ချစ်လို့သ၀န်တိုတာတဲ့။ သူချစ်တာကိုနားမလည်ဘူးလား တဲ့။သေရော။ ကျွန်တော်ပြန်စိတ်ဆိုးတော့သူမက ပြန်ပြီးကျွန်တော့်ကို နားလည်မပေးဘူး တဲ့။ ချာလပတ်ကိုရမ်းနေတာပဲဗျာ။ ဘာပဲပြောပြောသူမနဲ့ချစ်သူဖြစ်ရတာ ကျွန်တော့်အတွက် ကျေနပ်စရာတွေချည်းပါပဲ။ တစ်ခါတစ်လေ အဆင် မပြေဖြစ်တာကလွဲရင်ပေါ့။ ဒါကလည်းချစ်သူတွေကြားမှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတရားလေးတွေဆိုတာ ကျွန်တော် နားလည်ထားပါတယ်။ အခုတော့သူမနဲ့ကျွန်တော်က တစ်ယောက်တစ်နေရာဆီမှာပါ။သိပ်အဝေးကြီးမဟုတ်ပါ ဘူး သူမနဲ့ကျွန်တော့်ကြားမှာ မိုင်တစ်ရာကျော်ကျော်လောက်ပဲခြားထားတာပါ။နေ့ချင်းသွားပြီးနေ့ချင်းပြန်လို့ ရပါတယ်။ သူမနဲ့ဝေးနေပေမယ့် ကျွန်တော်သူမအပေါ်မှာ ထားခဲ့တဲ့ဂတိတွေ မပျက်ခဲ့ပါဘူး။ ခုလိုခဏခွဲနေကြ တာကလည်းသူမနဲ့ ကျွန်တော်အတူနေနိုင်ဖို့ပါ။ ချစ်သူနဲ့ခွဲပြီးနေနေရတဲ့ဘ၀က ခွဲခွါဖူးတဲ့သူတွေပဲ ကိုယ်ချင်း စာတတ်တာပါ။
ကျွန်တော်သူ့ကိုဘယ်လောက်သတိရနေကြောင်း၊ ဘယ်လောက်လွမ်းနေကြောင်း၊ သူ့အတွက် ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိပေးဆပ်ထားကြောင်းသူမ နားမလည်ပါဘူး။ သူမသိတာ သံသယတွေပါပဲ။ သူမပြောသလိုဆိုရင်တော့ ချစ်လို့သ၀န်တိုတယ်ပေါ့ဗျာ။ ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်သူမကိုချစ်တယ်။ သူမကလည်း ကျွန်တော်နဲ့ထပ်တူပဲဆိုတာ ကျွန်တော့် နှလုံးသားထဲမှာ အလိုလိုသိထားတယ်။နားမလည်အဆင်မပြေမှုတွေရှိ ပေမယ့်ဒါတွေက ခဏလေးပါပဲ။ပြီးရင်နှစ်ယောက်စလုံးနေနိုင်ကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်သူအရင်စခေါ်မလဲဆိုပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စောင့်ကြည့်နေကြတဲ့သူတွေပါ။ သိပ်မကြာခင်အချိန်လေးအတွင်းမှာသူမနဲ့ ကျွန်တော်လက်ထပ်တော့မယ်။ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ဘ၀တစ်ခု ကိုလက်တွေ့ တည်ဆောက်တော့မယ် ။ခုချိန် ဆိုရင်သူမဘယ်လောက်များပျော်နေမလဲ။ ကျွန်တော်ရော ...........???
စိတ်ကူးနဲ့ဘ၀ ပေါင်းစပ်ကြည့်တော့ ဘ၀က စောက်ထိုးကြီးဖြစ်နေတယ်..အခြေမခိုင်တဲ့စိတ်ဓါတ်တွေက
လေနှင်ရာ လွင့်ချင်ပေမယ့် ဘယ်ကိုရောက်မယ်ဆိုတာကိုတော့ ကြိုသိချင်တယ်.ကံကြမ္မာရဲ့ထိုးနှက်ချက်က
ဘုန်းကနဲ ဖင်ထိုင်လဲကျလောက်အောင်ပြင်းထန်လွန်းတော့ နလန်ထူဖို့ဆိုတာ မနက်ဖြန်လား ဒါမှမဟုတ်
သန်ဘက်ခါလား..... ဘ၀ကခါးတော့ အိပ်မက်တွေက မှုန်ဝါးဝါးပါပဲ ....တစ်ချိန်မှာအမြင့်ကိုရောက်ဖို့
အောက်ကနေနေပေးရတဲ့ဘ၀က ချောတိုင်တက်နေရသလိုပါပဲ..သူတစ်လှည့် ကိုယ်တစ်လှည့်လေ..... ဘ၀
ကိုလက်ပစ်ကူးကြည့်တော့ စုတ်ပြတ်သတ်နေတဲ့ လှိုင်းလုံးတွေကြားမှာ အတွေးအခေါ် တွေဖူးပွင့်လာတယ်...
တစ်ယောက်တည်းနေလို့မရတဲ့ဘ၀မှာ ဖေးမပေးမယ့်သူ ကိုပဲအဖော်လုပ်ချင်တယ် အပြန်အလှန်နားမှု ကိုငါ
လိုချင်တာ....သိုးယောင်ဆောင်ထားတဲ့မျက်နှာဖုံးတွေအောက်က အတ္တအစစ်အမှန် တွေကိုဘယ်သူ
တစ်ယောက်မှ မမြင်ပါဘူး... ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင်မှ ၀ါးတားတား ..ဘာမှမပါပဲငါဒီနေရာကိုရောက်ခဲ့ပေမယ့်
ပေါ်မှာ မေတ္တာမိုးရေတွေရွာသွန်းပေးချင်တာ ငါ့ဆန္ဒအစစ်အမှန်ပါ...ဆေးရောင်စုံတွေစုံလင်တဲ့လူသားတွေ
ကြားမှာ ငါတစ်ကယ်တပ်မက်တာ က အဖြူရောင်စစ်စစ်....ခါးသီးတဲ့ဝေဒနာတွေကို ကုစားပေးဖို့အချိန်ဆိုတဲ့
သမားတော်က အကောင်းဆုံးပါပဲ.... အနာကျက်မြန်အောင်တော့ မျှော်လင့်ခြင်း တွေကိုစားသုံးရလိမ့်မယ် ..
အပြိုင်အဆိုင် အတိုက်အခိုက်တွေသိပ်များတဲ့ လောကဘောင်ကြီးထဲမှာ တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ မကျရှုံးချင်တာက
တော့ ငါ့အတ္တ ပဲ.............
အရင်က multiply မှာရေးထားတာပါ .....
ငါ့ရင်ဘတ်က မနေ့က လိုပဲ
နှစ်ယောက်စလုံး ဥပေက္ခာ ပြုထားခဲ့ကြတယ်.....
လျှောက်နေတဲ့ လမ်းတွေ သာယာလို့လား....?
အတူ လျှောက်ဖူးတဲ့ လမ်းတွေက
အေးလဲ့ မတ်၁၀၊ ၂၀၀၈
ရှမ်း-မြန်မာ အဆိုတော် စိုင်းထီးဆိုင်(အသက် ၅၈နှစ်) သည် အစာအိမ်သွေးကြောပေါက်သည့်ရောဂါဖြင့် ယနေ့နံနက် ၅ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၌ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း ကျန်ရစ်သူ မိသားစုထံမှတဆင့် သိရသည်။
“ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာတုန်းက သွေးကြောပေါက်ပြီး သွေးစိမ့်နေတာ။ အဓိက ကတော့ သွေးအန်ပြီး အစာ အိမ်သွေးကြောပေါက်လို့ ဆေးရုံတက်ရတာ။ သွေး ၆ ပုလင်းသွင်းရတယ်။ ၅ ရက်မြောက်မှာ ဆုံးတာပါပဲ” ဟု အဆိုတော် စိုင်းထီးဆိုင်၏ တူမဖြစ်သူ နန်းမိုးအွန်းက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
အဆိုတော် စိုင်းထီးဆိုင်သည် အသည်းကျွမ်းဝေဒနာခံစားနေရပြီး မကွယ်လွန် ခင်က ဆေးရုံ ၂ ခါတက်ရသည်ဟု နန်းမိုးအွန်းက ပြောပြသည်။
အဆိုတော် စိုင်းထီးဆိုင်ကို ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်တွင် ရှမ်းပြည်နယ် လင်းခေးမြို့၌ မွေးဖွားခဲ့ပြီး ငယ်စဉ်ကပင် တေးဂီတ တီးခတ်ဖန်တီးမှုတွင် ဝါသနာထုံခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ၁၉၆၉ ခုနှစ်ဝန်းကျင်က မြန်မာ့အသံ၊ တိုင်းရင်းသား အစီအစဉ်တွင် ၎င်းကိုယ်တိုင်ရေးစပ်သော ရှမ်းသီချင်းများ စတင်ထုတ်လွှင့်ခွင့်ရခဲ့သည်။
၁၉၇၅-၇၆ ခုနှစ်ကတည်းက မန္တလေးတက္ကသိုလ်တွင် စိုင်းထီးဆိုင်ဟူသော အမည်ကို လူသိများခဲ့ပြီး ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ် ၀န်းကျင်တွင် နိုင်ငံတဝန်းလူသိများ အောင်မြင်သည့် အဆိုတော်တယောက် ဖြစ်လာခဲ့သည်။
တေးရေးစိုင်းခမ်းလိတ်ရေးသားပြီး စိုင်းထီးဆိုင် သီဆိုထားသည့် “မန္တလေးရောက် ရှမ်းတယောက်” သီချင်းမှာ အလွန် ထင်ရှားသည့် သီချင်းတပုဒ်ဖြစ်ပြီး ရှမ်းလူမျိုးတို့၏ ဓလေ့ရိုးရာနှင့် မောမြေ၏အလှကို ဖော်ကျူးသည့် တေးသီချင်းများစွာ ကိုလည်း သီဆိုခဲ့သည်။
စိုင်းထီးဆိုင်သည် ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းလက်ထက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စတီရီယိုခေတ်ဦးကို စတင်လမ်း ဖောက်ခဲ့သူများထဲမှ တဦး ဖြစ်ပြီး ထိုအချိန်က သူ့တီးဝိုင်းဖြစ်သော The Wild Ones တေးဂီတဝိုင်းကို အလွန်လူကြိုက်များခဲ့သည်။
ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးမြို့မှ လူငယ်ပရိသတ် တယောက်က “တောင်ကြီးနဲ့ ခွဲခွာနေချိန် သူ့သီချင်းသံစဉ်တွေကို ကြားတဲ့ အခါမှာ တောင်ကြီးမြို့ကို ပြေးပြန်ချင်စိတ်နဲ့ လွမ်းမိပါတယ်။ သူဟာ ကျနော် ၈ တန်း လောက်ကတည်းက အကြိုက်ရဆုံး အဆိုတော်ပါ” ဟုပြောသည်။
စိုင်းထီးဆိုင်၏ သီချင်းအများစုမှာ ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ ပြည်တွင်းစစ်ဒဏ်ခံခဲ့ကြရသည့် လူနေမှုဘ၀ကို ထင်ဟပ်ကြောင်း ဂီတ ဝေဖန်ရေးသမားတို့က ဆိုသည်။
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ၀န်းကျင်တွင် စိုင်းထီးဆိုင်သည် ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိ ဗိုလ်မှူးမြသန်းစံနှင့်ပူးပေါင်း၍ စစ်အစိုးရအကြိုက် ၀ါဒဖြန့်ချိရေးသီချင်းများကို သီဆိုခဲ့သောကြောင့် ပရိသတ်၏ ငြိုငြင်မှုကိုခံခဲ့ရသည်။ ၎င်း၏ နာမည်ကြီးသီချင်းတပုဒ်ဖြစ် သည့် “သဘာဝရဲ့ရင်သွေးငယ်တွေ” သီချင်းကိုလည်း ဗိုလ်မှူး မြသန်းစံ ရိုက်ကူးသော “ပါပီမ” ရုပ်မြင်သံကြား ဇာတ်လမ်း တွင် ဇာတ်ဝင်သီချင်းအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့သည်။
“ပါပီမ” ဇာတ်ကားသည် ၁၉၈၈ ခုနှစ် ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံအပြီး လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးလမ်းကို ရွေးချယ်ခဲ့သည့် ကျောင်းသားလူငယ်များအား သရော်ထားသည့် ၀ါဒဖြန့်ချိရေးဇာတ်ကား ဖြစ်သည်။
ပရိသတ်က တချိန်ကငြိုငြင်ခဲ့သော်လည်း စိုင်းထီးဆိုင်၏ သီချင်းကောင်းများကို ယခုအချိန်ထိ လူကြိုက်များလျက်ရှိပြီး သီချင်းခွေများမှာလည်း ရောင်းအကောင်းဆုံး စာရင်းဝင်နေဆဲဖြစ်သည်။
စိုင်းထီးဆိုင်သည် မြန်မာ့စတီရီယိုရေစီးကြောင်းအတွင်း ကော်ပီသီချင်းများကိုသာ အားကိုးနေရချိန်တွင် ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်ဖြင့် ဂီတလောကကို ထိုးဖောက်လာခဲ့သူတဦးဖြစ်သည်ဟု အဆိုတော် ခင်မောင်တိုးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“ယူကြုံးမရဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော့်ထက် သူကတနှစ်ငယ်တယ်လေ။ သူက အဆိုသမားသက်သက် မဟုတ်ဘူး၊ ဂီတသမား၊ အနုပညာသမား။ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်ကိုပဲ အဓိကလက်ကိုင်ထားပြီး တစိုက်မတ်မတ်လုပ်လာခဲ့တဲ့ သူပါ” ဟု ခင်မောင်တိုးက ဆက်ပြောသည်။
ယခုအခါ အဆိုတော်စိုင်းထီးဆိုင်၏ ကျန်ရစ်သည့် ရုပ်အလောင်းကို ရေဝေးသုသာန်ရှိ ရေခဲတိုက်တွင်ထားရှိပြီး လာမည့် ၁၂ ရက်နေ့တွင် ဂူသွင်းသင်္ဂြိုဟ်မည်ဟု သိရသည်။ အဆိုတော် စိုင်းထီးဆိုင် ကွယ်လွန်ချိန်တွင် ဇနီးသည် ဒေါ်ခင်သန်းစိုးနှင့် သားတယောက်၊ သမီး ၂ ယောက် ကျန်ရစ်သည်။
http://blackdream21.blogspot.com/ မှကူးယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ။
ကျွန်တော်ပထမနှစ်စတက်တဲ့နေ့မှာပဲ သူမကို စတွေ့ခဲ့တာပါ။ သူမပုံစံက ရိုးရိုးလေးလို့ပြောရလောက်အောင်လည်းမဟုတ်ဘူး။ ရိုးရိုးမဟုတ်လို့ ဟော့ဟော့ရမ်းရမ်းလားဆိုတော့လည်း မဟုတ်သေးဘူးဗျ။ သူမက ယဉ်ယဉ်လေးပါ။ (ယဉ်ယဉ်လေးနဲ့ရူးနေတယ်လို့ လည်းမထင်လိုက်နဲ့ဦးနော်)သူမကျောင်းကိုလာရင်အမြဲခေါင်းငုံ့ပြီးလာတယ်။ လမ်းလျှောက်ရင်လည်းအောက်တည့်တည့်ကိုပဲကြည့်တယ် ခလုတ်တိုက်မှာစိုးလို့ထင်ပါရဲ့။ စာသင်ခန်းထဲမှာလည်းဒီလိုပါပဲ။ ကျောင်းမှာသူမ ခေါင်းမော့နေတဲ့အချိန်က ဆရာစာသင်တဲ့အချိန်ပါပဲ။ သူမနဲ့ကျွန်တော်က မေဂျာတူဆိုတော့ သူ့ပုံစံကိုကျွန်တော်အလွတ်ရနေပါပြီ။ သူမကစကားပြောရင်လည်းတိုးတိုးလေးပဲဗျ။သူပြောတဲ့ စကားကိုသူကိုယ်တိုင်တောင်ပြန်ကြားရဲ့လားမသိဘူး။အပေါင်းအသင်းလည်းနည်းတယ်။ဘာပဲပြောပြောသူမက ကျွန်တော့်အတွက် သိပ်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်အဖြစ် ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ထဲမှာရှိနေခဲ့တာ ဘာလိုလိုနဲ့ပထမနှစ်တစ်ဝက်တောင်ကျော် ခဲ့ပါပြီ။ သူမကတော့ကျွန်တော့်ကို ရှိတယ်လို့တောင်ထင်ရဲ့လားမသိပါဘူး။ သူမကအမြဲတမ်းပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သီးခြားနေသူလေ။ ။ တစ်နေ့တော့ ကျောင်းကင်တင်းမှာသူမကိုတွေ့တော့ ကျွန်တော်အံ့သြသွားတယ်။သူကတော့ကျွန်တော့်ကိုမတွေ့ပါဘူး အာရုံစိုက် ပြီးအလုပ်တစ်ခုလုပ်နေတာ။ သူမမျက်မှောင်ကျုံ့ပြီးနှုတ်ခမ်းကိုလျှာနဲ့သပ်တယ်။ပြီးတော့ခေါင်းကုတ်တယ်။စိတ်ရှုပ်နေပုံပါပဲ။ ဒါတွေဟာ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ကဗျာတွေပါပဲ။သူမကသူ့သူငယ်ချင်းနဲ့ချက်ကစားနေတာပါ။ ကြည့်ရတာ သူမရှုံးတော့မယ်ထင်ပါရဲ့။သူမတို့ဘယ်ချိန်ကတည်းကရောက်နေလဲတော့မသိဘူး။ ကျွန်တော်ရောက်ပြီးနောက်ထပ် တစ်နာရီလောက်ထိ ပွဲကမပြီးသေးဘူး။ခဏနေရင် လက်တွေ့ခန်း ၀င် ရတော့မယ်။သူတို့ကတော့အရှိန်ကောင်းနေတုန်းပဲ။ ခဏနေတော့ သူမလက်ကနာရီကိုတစ်ချက်ကြည့်တယ်။ စားပွဲထိုး ကောင်လေးကို ခေါ်တယ်။ပိုက်ဆံရှင်းပြီး သူ့သူငယ်ချင်းနဲ့အတူ ထွက်သွားတယ်။ကျွန်တော်လည်း ပိုက်ဆံရှင်းပြီး သူတို့နှစ်ယောက် နောက်ကနေလိုက်သွားတယ်။ကံကောင်းချင်တော့ သူမလက်ကိုင်ပုဝါလေး ကျကျန်ခဲ့တယ်။အဲဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းနောက်ကနေလိုက် ပေးတာပေါ့ဗျာ။ကြည့်ဖူးတဲ့ရုပ်ရှင်ကားထဲကလိုပေါ့(ဒါပေမယ့် ဒါက တစ်ကယ့်အဖြစ်အပျက်နော်) သူမက ရုပ်ရှင်ထဲကလို ဇာတ်လမ်းဆင် တာလား ဘာလားဆိုပြီးတော့ရန်မတွေ့ပါဘူး။ကျွန်တော်ပေးတဲ့လက်ကိုင်ပုဝါလေးကိုသေချာကြည့်တယ်။သူ့ လက်ကိုင်ပုဝါမှန်းသိတော့ ကျေှးဇူးပဲနော် တဲ့...... ဟား....ဒီညတော့အိပ်မက်တွေလှတော့မှာပဲ။ဒီလိုနဲ့လက်ကိုင်ပုဝါလေး အစပြုပြီးသူမနဲ့ကျွန်တော် သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်သွားကြတယ် ဆိုပါတော့ဗျာ။ ။
ဒီလိုနဲ့ ဒုတိယနှစ်ရောက်လာတယ်။သူမကကျွန်တော့်အတွက်တော့သခင်ပါပဲ။သူငယ်ချင်းဆိုပေမယ့် ကျွန်တော်ကကြိတ်ပြီးချစ်နေတဲ့သူဆိုတော့ သူမဘာခိုင်းခိုင်းကျွန်တော်မညီးမညူပဲလုပ်ပေးပါတယ်။ခုဆိုရင်သူမ နဲ့ကျွန်တော် တော်တော်လေးကိုရင်းနှီးနေပါပြီ။ပြောရရင်ပိုက်ဆံလိုရင်တောင်သူမဆီကချေးယူရဲလောက် အောင်ကိုရင်းနှီးနေပြီ။(ကျွန်တော်ကရင်းနှီးပြီဆိုတာနဲ့ပိုက်ဆံချေးတော့တာပဲ)သူမကတော့ပေးရှာပါတယ် ရှိတဲ့ အချိန်ပေါ့။ကျွန်တော်ပြန်မပေးရင်လည်း မတောင်းဘူး။ပေးရင်တော့ယူတယ်။နှစ်နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုမှာ သူမနဲ့ကျွန်တော်သံယောဇဉ်တွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။သူမကိုကျွန်တော်ရည်းစားစကားပြောတော့ သူမက တစ်နေ့ ကျွန်တော်ဒီလိုပြောမယ်ဆိုတာသိပြီးသားတဲ့။အဲဒါကြောင့် သူကလည်း ကြိုပြီးစဉ်းစားထားတယ်တဲ့။ ဒါနဲ့သူမကကျွန်တော့်ကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ်။တစ်နဲ့တစ်ပေါင်းရင်ဘာရလဲ တဲ့။ကျွန်တော်ကလည်းချက်ချင်း ပဲနှစ်လို့ဖြေလိုက်တယ်။ သူမကနှာခေါင်းရှုံ့ပြီး မှားတယ် တဲ့။အဖြေက တစ် တဲ့။ ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့လဲမေးတော့ သူမက ယောင်္ကျားတစ်ယောက်နဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ပေါင်းစပ်လိုက်ရင် တစ်ဘ၀ဆိုတဲ့အဖြေရတယ် တဲ့။ ပျော်လိုက်တာကောင်မလေးရယ်.....။အဲဒီအဖြေဟာကျွန်တော့်အတွက်မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတာ အစကတည်း က ကျွန်တော်သိခဲ့ရင်..........။
ဒီလိုနဲ့ပြက္ခဒိန်တွေတစ်ရွက်ပြီးတစ်ရွက်ပြောင်းပြီး ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် နောက်ဆုံးနှစ်ရောက်လာ တယ်။နှစ်ယောက်အတူစာတွေကျက်ပြီး တစ်ခါတစ်လေ စိတ်အပန်းပြေ နှစ်ယောက်အတူ ချက်ကစားကြတယ်။ အနာဂတ်အတွက် ဇယားတွေချကြတယ်။ခုတစ်လောသူမမျက်နှာ သိပ်မကောင်းတာသိပေမယ့် ဖွင့်မမေးဖြစ်ခဲ့ ဘူး.သူမမျက်နှာကြည့်ရတာ တစ်ခုခုကိုပြောချင်နေသလိုပါပဲ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းသူ့စိတ်ထဲပေါ့သွားအောင် ဘာဖြစ်နေတာလဲ တစ်ခုခုပြောချင်နေတာလား လို့မေးတော့သူမက ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ ဆိုပြီးကျွန်တော့် မျက်နှာကိုတစ်ချက်ကြည့်တယ် ပြီးတော့သူမကပဲ စာမေးပွဲဖြေပြီးမှပဲပြောမယ် တဲ့။ ဒီလိုပြောတဲ့အချိန်မှာ သူမ မျက်နှာ တော်တော်လေးညှိုးသွားတယ်။ ကျွန်တော်လည်းဆက်မမေးတော့ပါဘူး။ခဏနေတော့ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ် ပြန်ခဲ့ကြတယ်။
ဒီလိုနဲ့စာမေးပွဲနောက်ဆုံးနေ့ ရောက်သွားတယ်ပေါ့ဗျာ။ သူမကိုမေးတော့ဖြေနိုင်တယ်တဲ့ ။ကျွန်တော် လည်းဖြေနိုင်တယ်ဆိုတော့ သိပ်မကြာခင်ဘွဲ့ရတော့မယ် ပြီးရင် သင့်တော်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဝင်လုပ်ပြီး နှစ်ယောက် ပေါင်းဘ၀တစ်ခု တည်ဆောက်မယ်လို့တွေးပြီး ကျွန်တော်က သူမကိုမျှော်လင့်ကြီးစွာနဲ့ ကြည့်တော့ သူမက ကျွန်တော့်လက်ထဲကိုစာအိတ်တစ်အိတ်ထည့်ပေးတယ် သူပြန်သွားမှဖွင့်ကြည့်ပါတဲ့။နေသိပ် မကောင်းလို့သူပြန်တော့မယ်တဲ့ ဆိုပြီး သူထွက်သွားတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့သူမကိုနားမလည်စွာရပ်ကြည့် နေမိတယ်။ ခဏနေမှ သတိရပြီး လက်ထဲကစာအိတ်ကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေ ပြာသွား တယ် ဟုတ်ရဲ့လားဆိုပြီးသေချာထပ်ဖတ်ကြည့်တယ် သေချာတယ်ဆိုတော့မှကျွန်တော်သက်ပြင်းတစ်ချက်ချ လိုက်တယ်။ကျွန်တော်သူမကိုဘာစကားမှလည်းမပြောနိုင်တော့ပါဘူး။သူမကထွက်သွားပြီလေ။ခုတော့ကျွန်တော့် မှာ သူမရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာကြီးကိုင်လို့။ ဪ နောက်တစ်ပတ်ဆိုင်သူမလက်ထပ်တော့မှာပါလား။ ။
POSTED BY နွေမုန်တိုင်း2COMMENTS
နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် စိုင်းထီးဆိုင်ကွယ်လွန်အေးလဲ့ ...